Heerkulka sare iyo xiriirka ay la leeyihiin heerka dhimashada | Saadaasha Shabakadda
Heerkulka sare iyo xiriirka ay la leeyihiin heerka dhimashada
Casudi casals | | Mawjadaha kuleylka
Heerkulka sare ayaan badanaa la socon wax kasta oo wanaagsan. Waxay sababi karaan dhacdooyinka cimilada ee aadka u daranSida duufaanku u kordho heerkulka biyaha, abaaraha ka sii weyn, dabka oo sii xumaada, iwm. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxaa jira xiriir udhaxeeya heerkulka sare iyo heerka dhimashada.
Qof walba khatar baa ku jirta. Hawlaha ama shaqooyinka banaanka lagu qaban karo sidoo kale aad bay khatar u yihiin. Sidee kiiska looga qoomameynayaa ninka 54 jirka ah ee u dhintey 2 usbuuc ka hor kuleylka dartiis isagoo ku guda jira hawlo laami ah Morón de la Frontera. Laakiin waxaa jira koox dad ah, iyadoon loo eegin shaqada ay qabtaan, ay ugu nugul yihiin saameynta heerkulka sare.
Yuu yahay iyo sidee buu u saameeyaa?
Heer jir ahaaneedWaxaan helnaa waayeelka, dadka qaba wadnaha, neefsashada ama xaaladaha sonkorowga. Waxaa la cadeeyay in kaliya soo-gaadhista heer-kulka sarreeya ay mas'uul ka tahay, laakiin sidoo kale muddada dheer ee ay sii jirto, heerkul sarreeya oo dheereeya. Maalintii heerkulkeedu sarreeyo, boqolkiiba dhimashada ayaa sare u kacda 4% marka loo eego celceliska qiyaasta. 2 maalmood oo leh heerkul sarreeya, dhimashadu waxay sare u kacdaa 10% maalinta xigta, iyo ilaa 22% maalinta saddexaad. Carruurta ka yar 1 sano waxay kor ugu kacdaa 25%, wayna labanlaabaa haddii ay sidoo kale qabaan xaalado neefsasho, dheefshiidka ama wadnaha.
Heer maskaxeed waxay kaloo burburisaa, waayo xiriir ayaa laga dhex helay heerarka ismiidaaminta iyo hirarka kuleylka.
Dib u jaleecida diiwaanka, waxaan heleynaa kuleylkii weynaa ee ku dhuftay Yurub 2003. Waxaa jiray 35.000 dhimasho ka badan intii la filayay
Xusuusnow muhiimadda ay leedahay in laga fogaado kuleylka marka heerkulku dhaco. Nadiifi naftaada iskana ilaali jimicsiga jirka xilliyada ugu sarreysa. Gaar ahaan kuwa ugu nugul, laakiin dhammaantood guud ahaan. Saamaynta ay ku leedahay jidhkeenna ayaa saamayn ahaan saamayn ugu leh heerkulka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Heerkulka sare iyo xiriirka ay la leeyihiin heerka dhimashada
Hindiya waxay dhistaa guryo cagaaran si loo xakameeyo isbedelka cimilada
Kordhinta kirada baabuurta ayaa wasakheysa hawada jasiiradaha Balearic